Muuqaalka macluumaadka caalamiga ah ayaa horumaraya, agabka habaynta macluumaadka ayaa ku takhasusay oo u habaynaya tirada badan ee macluumaadka hab kala duwan. Deegaanka macluumaadka waxa uu ka kooban yahay qaabab cusub oo dhex dhexaadin ah, hannaan caalamiyaynta, shakhsiyaynta iyo wadaaga macluumaadka kaas oo u kobcaya si waafaqsan qaybaha macluumaadka.
Milicsiga wadajirka ah ee jawiga macluumaadka ee hadda jira ee cilmiga agrobiosciences sidaas darteed waxay suurtogal ka dhigaysaa horumarinta aqoonta macnaha guud ee soo saarista, tafatirka iyo faafinta macluumaadka. Sababtoo ah helitaanka dariiqa qofka ee deegaanka macluumaadka waxay la macno tahay in la ogaado sida loo doorto hababka macluumaadka ugu habboon, la socodka iyo qalabka cilmi-baarista iyada oo loo eegayo nooca macluumaadka la beegsaday.
Caqabadaha hadda jira waa Decryption of macluumaadka, habaynteeda, abaabulkeeda, taasoo suurtogal ka dhigaysa in la ansixiyo macluumaadka tayada lagama maarmaanka u ah shaqadeeda. Kartida agabka ka dhigaya in lagu heli karo la socodka, cilmi baadhista, ururinta iyo wejiyada xulashada ka dibna waxa ay fududaysaa qoondaynta iyo faafinta macluumaadka la doortay.
MOOC-dan waxay ujeedadeedu tahay waxay ku taageertaa fahamka deegaanka macluumaadka ee cilmiga beeraha si aad si hufan ugu noqoto waxbarashadaada, diyaarinta koorsadaada iyo hab-dhaqankaaga xirfadeed.
Macluumaad beero Diisambar 16, 2021Tranquillus
socdaXeeladaha ogaanshaha kansarka